Ziyashoda izikole zabakhubazekile | News24
Ziyashoda izikole zabakhubazekile
UMEYA wasoGwini uMama uNtombifikile Gumede uthe kusenegebe elikhulu ngezikole zabakhubazekile Ogwini lulonkana.
Lokhu uGumede ukusho emcimbini wokuklomelisa abasebenza ngokweqile ezikoleni zabakhubazekile obubanjwe eSuid-Natal High School, esinye sezikole esifundisa abakhubazekile noma labo abadinga isineke umabefundiswa.
“Kubona bonke omasipala abakhona la ogwini ziyashoda izikole zabakhubazekile. Ziningi izikole kepha eziningi zazo azinazo izinhlelo noma icurriculum yalabo abathatha kancane,” kusho uGumede
Uthe uma ezibala izikole ezikhona kumasipala ngamunye wathola ukuthi abanye omasipala abanazo.
“Uma uthatha ukubheka eMzumbe, ziningi izikole khona kepha zimbili kuphela eziqondene nabakhubazekile. EHibiscus zintathu, kuMuzwabantu sinye, EVulamehlo zimbili eMdoni sisodwa angazi-ke noma eZinqoleni sikhona yini,” kusho uGumede
UGumede uthe uMnyango wezeMfundo kusamele ulubhekisise loludaba.
“Baningi abantwana abakhubazekile noma abanezidingo eziyisipesheli abahleli emakhaya ngenxa yokuthi abazali abanalo ulwazi lokuthi umuntu okhubazekile unaso isiphiwo noma unalo italente futhi unalo ilungelo lokuthola inqalasizinda yemfundo. Uma umntwana ehluleka ukufunda noma ukubamba ekilasini njengabanye, akusho ukuthi sekuphelile ngaye,’ kusho uGumede.
Uthe kumele zona lezikole eziningi kangaka ezikhona zibenezinhlelo noma amaklasi azokwazi ukuthi athathe lezingane zithole uthisha abazoba nesineke nazo.
Umbuzo obuzwe uMeya owokuthi lezingane kumele zenziwe njani zihlale emakhaya na.